Zonke iinkcukacha zePS5 esizaziyo ukuza kuthi ga ngoku-Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi
I-PlayStation 5 iboniswe ngokusemthethweni, zonke iinkcukacha
Emva kokulibaziseka kokuqala kwengcaciso-ntetho yayo, eyayilindelekile kusuku oludlulileyo lwe-4, zonke iinkcukacha zedesktop entsha yakwaSony ekugqibeleni zikhutshiwe. Ulindelo lwaluphezulu kwaye uSony akazange adanise kumnyhadala wabo omkhulu wokuqaliswa kwePlayStation 5., apho singabonanga kuphela imidlalo yevidiyo yokuqala kodwa kunye nekhonsoli uqobo.
Sekuyithuba elingaphezulu kweyure ukubhengezwa okuqhubekayo kunye nezinto ezininzi ezimangazayo phakathi kwazo ekulindeleke kakhulu imidlalo emithathu yevidiyo, kodwa kunye nezinye iiprojekthi ebesingazazi ukuza kuthi ga ngoku. Lilonke sinemidlalo yevidiyo engaphezulu kwamashumi amabini, kodwa le Ibe ngumsitho oneeflegi ezininzi ezahletywayo, ezinje ngesiqendu esitsha se-Resident Evil saga, iSpiderman entsha okanye iHorizon Zero Dawn entsha. Kule nqaku siza kunika iinkcukacha zonke iinkcukacha zekhompyuter kunye nesoftware ebekiweyo.
1 I-PlayStation 5: uyilo olothusayo kunye nekamva
1.1 Uyilo kunye neenguqulelo
1.2 Izixhobo zokugqiba amava
2 Iividiyo zemidlalo: yintoni ebaluleke kuthi
2.1 Umhlali Evil VIII
2.3 Imiphefumlo yeDemon
2.4 I-Horizon Eqingqiweyo iNtshona
2.5 I-Ratchet kunye ne-Clank: Rift Ngaphandle
I-PlayStation 5: uyilo olothusayo kunye nekamva
Okoko umthetho wabhengezwa DualSense, bonke abalandeli bePlayStation abayekanga ukuqikelela malunga noyilo olunokuba nalo ikhonsoli. Ewe, nangona sele kwenziwe ukuthandaza, ukulinda ekugqibeleni kugqityiwe, ngaphakathi Umboniso wokugqibela womlilo apho kuboniswa inqwelwana engaqondakaliyo apho isixhobo esitsha sakwaSony senziwe khona. Ukongeza kwimo ebonakalayo, basibonelele ngeenkcukacha malunga nazo zonke izixhobo eziza kuhambelana nenkqubo.
Uyilo kunye neenguqulelo
Into yokuqala eyatsala umdla wethu kukuba ikhonsoli iya kusasazwa kwiimodeli ezimbini: enye ene-Ultra HD Blu-ray yediski yokufunda kunye ne-PlayStation Digital Edition eya kuyenza ngaphandle kwayo. Kwinkcazo eboniswe kwividiyo, bayenze yacaca gca kuthi ukuba amava adlalwayo aya kufana kwizixhobo zombini, ngokwahluka kubuhle ngenxa yesithuba ekuhlalwa kuso ngumfundi wediski.
Ngokumalunga noyilo, yithi sijongene imbonakalo ye-avant-garde yobuhle apho umbala omhlophe uphawuleka ukuba ungaphandle kwayo kunye nombala omnyama wepiyano kwinxalenye yayo esembindini. Ukhatshwa zezinye I-LED eluhlaza okwesibhakabhaka eza kubonisa xa ivuliwe ukuyinika inkangeleko yexesha elizayo ngakumbi.
Ngokubanzi, uyilo luye lwathandwa kakhulu ngabalandeli, abaye bathandana namagophe alo abhengeziweyo, nangona yonke into inabachasi bayo.
Izixhobo zokugqiba amava
Nantoni na esiyikhethayo, ukuhambelana nezixhobo zayo kuya kuba yinto efanayo, ebonisa uyilo olufanayo lwe-avant-garde iyonke, eqaqambisa umbala omhlophe kuzo zonke. Njengokuncinci Ukulawula kude ukulawula icandelo le-multimedia, ii-headphone ezisemthethweni ezithembisa isandi esimangalisayo se-3d, itshaja yolawulo kunye nekhamera entsha yePlayStation.
Zonke zinokudityaniswa nekhonsoli ngokwazo kwizibuko i-USB kunye nezibuko Uhlobo lwe-USB C ibekwe ngaphambili kwenkqubo.
Iividiyo zemidlalo: yintoni ebaluleke kuthi
Ngaphezulu kwe-20 yemidlalo yevidiyo ebonisiweyo, eminye inesidima kwaye eminye ingaziwa eluntwini. Siza kuvavanya ezona zibhengezo zibalulekileyo nezothusayo esinokuzibona kwinkcazo-ntetho.
Umhlali Evil VIII
UCapcom uyenzile kwakhona, esebenzisa umcimbi weSony ukuba abe yenye yezona zilindelekileyo kwimidlalo yevidiyo kwisizukulwana esilandelayo seekhonsoli. Yaboniswa nge-cinematic eye yasebenza ukungqina ezinye zeenkcukacha ebezikhutshiwe kutshanje.
I-werewolves iza phambili kule adventure entsha yoyikekayo, ebeka isenzo sayo kwindawo enentaba ethi isikhumbuza kakhulu kwinto ebonwayo kwi-Resident Evil 4, nto leyo eyenze abaninzi bacinga ukuba ibiyimpinda yayo. Ngaphandle kweenkcukacha ezininzi malunga nebali, esikubonileyo kwesi sihloko kuthembisa okuninzi kwaye kusivumela ukuba sifumane umbono ngalo ithoni emnyama ukuba izenza ngathi ine-protagonist yayo.
Umdlalo izakubetha ezivenkileni kwihlabathi liphela ngo-2021, eyenza kucace gca ukuba uCapcom ufuna ukucudisa uthotho ngokuthatha unikezelo lonyaka, sonke sinethemba lokuba umgangatho ufana nayo yonke into esibonelelwa yinkampani mva nje.
Olunye lothotho lweempawu zohlobo lweSony lubuyela kwinqanaba ngokuhanjiswa kwenombolo. Inkampani kunye nabathandi bokuqhuba kudala belindele umntu oza kungena ezihlangwini kwiGranTurismo 6.
Umdlalo wevidiyo oqhubayo ubonise umdlalo weDlalo apho ezibonakalayo ezimangalisayo loo nto yahluke kancinci kwinyani. Le demo ibonisa isimbo esifanelekileyo sokuqhuba esinqwenelwa sisihloko ukwanelisa abona basebenzisi.
Owona mhla wokuhamba awukaziwa, kodwa kulindeleke ukuba ibe yenye yemidlalo yevidiyo ephumayo.
Amarhe ayinyani, iMimoya yeDemon ibuyile kwaye yenza njalo njengoko kulindelwe kwisihloko esibaluleke kakhulu kwihlabathi lemidlalo yevidiyo.
Ukuzalwa kweMiphefumlo eyaziwayo kubuyela kwinqanaba kunye nomfanekiso ohlaziyiweyo kunye nomtsalane, obonisa ukuba ayisiyophakamisa ubuso, kodwa kukwakhiwa kwasekuqaleni. Kwividiyo yakhe ebukekayo singazibona iindawo ezibonisa umdlalo kunye nothixo wenamba owoyikwayo.
Umhla ochanekileyo awukanikwa kodwa kulindeleke ukuba uphume ngenjongo yokubhiyozela iminyaka elishumi yale saga ingumfuziselo.
I-Horizon Eqingqiweyo iNtshona
Umkhondo ekudala ulindelwe Horizon Zero Dawn Wabonwa kumsitho wakwaSony ngetreyila enamandla, apho asibonisileyo ukuba yinto eyonwabisayo eyahluka ngakumbi kunaleyo yantlandlolo. Abalinganiswa abatsha, useto olutsha nolubanzi lokuhlola kunye nomdlalo wokudlala omnandi njengalowo sinokonwabela ukufakelwa okokuqala.
Umdlalo weMidlalo yeGuerrilla awunawo umhla oqinisekisiweyo, kodwa kwividiyo uyabona ukuba umdlalo uhambele phambili, mhlawumbi uya kusothusa njengomdlalo wokuqala kumdlalo olandelayo.
I-Ratchet kunye ne-Clank: Rift Ngaphandle
Ukuya esiphelweni ndiyishiyile eyam umdlalo oyena ubambe umdla wabadlali bonke abonisiweyo. URatchet kunye noClank babuyela esenzweni kwisihloko esitsha esiza kwenza ukujija kuthotho.
Kumdlalo wekharavani omangalisayo obonisiweyo, asibonanga kuphela umboniso bhanyabhanya omangalisayo owenziwe nge-injini yomdlalo, kodwa iMidlalo ye-Imsomniac isimangalisile ngesampulu yeGamePlay emsulwa, apho isenzo esingapheliyo, Ukuqaqambisa ngaphezulu kwayo yonke Ukuthunyelwa ngomnxeba ngapha nangapha, Ukuthandana nembono entsha xa ujongene nokulwa.
Abavelisi bayo bacacisa ukuba umdlalo uphuhlisiwe kwaye Uyile uthathe ithuba lwezixhobo zePS5, ethembisa ukusebenzisa amandla ayo.
Umdlalo awunawo umhla wokukhutshwa ngokusemthethweni, kodwa kumdlalo weqonga uphuhliso oluqolileyo luyabonakala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » I-PlayStation 5 iboniswe ngokusemthethweni, zonke iinkcukacha
Sihlalutya iAmazon Fire HD 8 2020 entsha
I-Sonos Arc, ibar yesandi ebutofotofo ngokwenene -I-Unboxing